Moto unotorwa pakati pemavhiri (1-8)
Kutsanangurwa kwemakerubhi nemavhiri (9-17)
Kubwinya kwaMwari kunobva patemberi (18-22)
10 Pandakanga ndakatarisa, ndakaona pamusoro pechinhu chakawaridzwa chaiva nechepamusoro pemakerubhi paine chimwe chinhu chakaita sedombo resafaya, uye chakanga chakafanana nechigaro cheumambo.+ 2 Akabva ati kumurume akanga akapfeka nguo yejira:+ “Pinda pakati pemavhiri,+ pasi pemakerubhi, uzadze maoko ako nemazimbe emoto ari kubvira+ ari pakati pemakerubhi, uamwaye pamusoro peguta racho.”+ Saka akapinda ini ndakatarisa. 3 Makerubhi acho akanga akamira kurudyi rweimba pakapinda murume wacho, uye gore rakazadza chivanze chemukati. 4 Kubwinya kwaJehovha+ kwakasimuka kuchibva pamakerubhi kukaenda pachidimbati* chesuo reimba yacho, uye zvishoma nezvishoma imba yacho yakazadzwa negore,+ uye chivanze chainge chizere nekupenya kwekubwinya kwaJehovha. 5 Kutinhira kwemapapiro emakerubhi kwaigona kunzwika muchivanze chekunze, sezvinoita inzwi raMwari Wemasimbaose paanotaura.+ 6 Akabva arayira murume akanga akapfeka nguo yejira, achiti: “Tora moto pakati pemavhiri, pakati pemakerubhi,” uye akapinda, akamira pedyo nevhiri. 7 Rimwe kerubhi rakabva ratambanudza ruoko rwaro ruchienda kumoto wakanga uri pakati pemakerubhi.+ Rakatora mumwe moto rikauisa mumaoko emurume akanga akapfeka nguo yejira,+ uyo akabva autora, akabuda. 8 Makerubhi acho aiva nezvaiita semaoko emunhu pasi pemapapiro awo.+ 9 Pandakanga ndakatarisa, ndakaona mavhiri mana aiva pedyo nemakerubhi acho, vhiri rimwe chete riri pedyo nekerubhi, uye mavhiri acho aiita seaipenya sedombo rekrisoriti.+ 10 Kana kuri kutaridzika kwawo, ese ari mana akanga akafanana, achiita sekuti ivhiri riri mukati merimwe vhiri. 11 Paaifamba, aikwanisa kuenda chero divi pamativi acho mana asina kumbochinja kwaakatarisa, nekuti aienda kwese kwaitarisa musoro asina kumbochinja kwaakatarisa. 12 Akanga azere nemaziso pamiviri yawo yese, pamisana yawo, pamaoko awo, pamapapiro awo, nepamavhiri acho, mavhiri awo ese ari mana.+ 13 Kana ari mavhiri acho, ndakanzwa inzwi raishevedzera kwaari richiti, “Imi mavhiri!” 14 Rimwe nerimwe* raiva nezviso zvina. Chiso chekutanga chaiva chekerubhi, chechipiri chaiva chemunhu, chechitatu chaiva cheshumba, uye chechina chaiva chegondo.+ 15 Makerubhi acho aisimuka achienda mudenga, uye ndiwo zvisikwa zvipenyu* zviya zvandakanga ndaona kurwizi rwaKebhari,+ 16 uye paifamba makerubhi, mavhiri acho aifambawo ari pedyo nawo; uye makerubhi acho paaisimudza mapapiro awo achienda mudenga, mavhiri acho aisachinja kwaakananga kana kubva kudivi rawo.+ 17 Paaimira, iwo aimirawo; uye paaisimuka, iwo aisimukawo pamwe chete nawo, nekuti mweya waishanda pazvisikwa zvipenyu* waiva maari. 18 Kubwinya kwaJehovha+ kwakabva kwasimuka pachidimbati chesuo reimba yacho, kukanomira pamusoro pemakerubhi.+ 19 Makerubhi acho akabva asimudza mapapiro awo, akasimuka achibva panyika ndichizviona. Mavhiri acho aivawo pedyo nawo paakasimuka. Akanomira pasuo regedhi rekumabvazuva reimba yaJehovha, uye kubwinya kwaMwari waIsraeri kwaiva pamusoro pawo.+ 20 Izvi ndizvo zvisikwa zvipenyu* zvandakanga ndaona zviri pasi paMwari waIsraeri kurwizi rwaKebhari,+ saka ndakabva ndaziva kuti aiva makerubhi. 21 Ese ari mana aiva nezviso zvina, nemapapiro mana, uye aiva nezvaiita semaoko emunhu pasi pemapapiro awo.+ 22 Zviso zvawo zvakanga zvakaita sezviso zvandakanga ndaona pedyo nerwizi rwaKebhari.+ Rimwe nerimwe raifamba rakananga mberi.+
^ Kureva, kerubhi rimwe nerimwe.
^ ChiHeb., “ndicho chisikwa chipenyu.”
^ ChiHeb., “mweya wechisikwa chipenyu.”
^ ChiHeb., “Ichi ndicho chisikwa chipenyu.”